Somaaliyaa: Waltti dhufenyi Pirezidaantiin Somaaliyaa ollaa waliin qabu maaf mormiin mudate? - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidaantiin Somaaliyaa walitti dhufeenya Itoophiyaafi Eertiraa waliin ummateef gaaffiin irratti ka'usaa himame.
Miseensoonni paarilaamaa biyyatti gara 100 ta'an pirezidaantii biyyattii Abdullah Faarmaajoo irratti amantaa akka hinqabne yaada murte dhiyeessu isaanii BBC Somaalee maddawwan isaa eeruun barreesseera.
Miseensoonni paarlaamichaa mormii kana kan dhiyeessan, pirezidaantichi seeraan ala Itoophiyaa fi Eeriraa waliin waliigaltee sirrii hintaane taasiseera kan jedhuun.
Kanatti aansuunis motummaan Somaaliyaa teessuma isaa Moqaadishoo taasifachuun Dhaabbanni Motummoota Gamtomanii deeggaramu rakkina keessa galeera jedhaeera.
Afi yaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa yaada murtee miseensoonni dhiyeeffatan fudhuusaanii mirkanneessaniiru.
Pirezidaanticha irratti amantaa dhabusaanii kan himan miseensoonni paarlaamaa Somaaliyaa akka jedhanittis, pirezidaanti Abdullaah Faarmaajo haala heera biyyattiin faallaa ta'een biyyoota naannichaa waliin waliigaltee taasisaniiru jechuun himatu.
Kana malees, Somaaliyaa Itoophiyaa fi Eeritraa waliin walitti makuuf waliigaltee icciitii mallatteesseera jechuun seeraan ala hojachaa jiraachu himaniiru.
Miseensoonni paarlaamaa erga himannaa pirezidaanticha irratti dhiyeessaniin guyyaa tokko boodas, mormiisaanii ibsataniiru.
Miseensoonni paarlaamaa pirezidaantichi akka himataman gaafatan kunneenis haala birmadummaa biyyattii diiguun Ioophiyaa waliin bufatawwan Somaaliyaa irratti waliigaltee dinadgee taasiseera jechuun himataniiru.
Qaamoolee tokko tokko akka jedhanittis, dhimmicha fedhii biyyoota galoo galaanaa Somaaliyaa keessatti qabaniin kan waliin walqabateedha.
Qaamoleen siyaasaa Somaaliyaa deeggarsa Gamtaa Imireetota Arabaafi Kawaataar; biyyoota naannichatti olaantummaa isaanii cimfachuuf yaalan irraa argataniirratti adda qoodamaniiru.
Qaamoleen siyaasaa Somaaliyaas maallaqa biyyoonni dureeyyoonni kunneen kennaniif kan barbaadan yoo ta'u, garuu haalli kun ammoo biyyatti keessatti dhabiinsa tasgabbii gara biraa akka hin uumneef sodaatameera.
Gaaffii miseensoota paarlaamaa kana ilaalchisee yaadniwwan adda addaa ka'aa kan jiru yoo ta'u, dhimmichi mariifi murteedhaaf paarlaamaatti kan dhiyaatu ta'usaan hanga ammaatti kan beekamu hinjiru.
Erga ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii boda ilaalacha diinummaa biyyoota jiddu ture dhiisuun haala hinbaramneen oggantoonni Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa walitti dhufeenya isaanii cimfachuun marii adda addaa taasisaniiru.
Bulchiinsoonni Somaaliyaa duraanii garuu waldhabdee pirezidaantii fi ministira mummee jidduu tureen jeeqamaa kan turan yoo ta'u, erga Abdullaah Faarmaajo pirezidaanti ta'un filatameen booda Somaaliyaan tasgabbii siyaasaa argachuun turtee jirti.
Mucaan Somaaliyaa akka aangoo motummaa hinfudhanneef Al-Shabaab sodaate